Ireo loharanom-pahalalana: hotely boky, fikarohana sidina, fiara fanofana, ...
IRETO manomana dia ary mila fanampiana ve ianao ?. Avy eo ity tranonkala ity no tena tadiavinao. Amin'ny absolutviajes.com manana ny fampahalalana tsara indrindra momba ny toerana fizahan-tany lehibe eto amin'izao tontolo izao izahay. Isan'andro izahay dia mamoaka lahatsoratra miaraka amin'i torohevitra momba ny dia, ireo toerana tsy azonao adino, ny morontsiraka tsara indrindra, ny natiora tsy mampino, ny gastronomy tsara indrindra ary maro hafa.
Azonay atao ve ny manampy anao amin'ny dianao?
Raha manomana dia tsara ianao mila fanampiana ianao amin'ny famandrihana hotely, mitady sidina, manakarama fiara fanofana,… ary izany rehetra izany amin'ny vidiny mety indrindra ary miaraka amin'ny antoka rehetra amin'ny tsena. Ahoana raha? Eto, afaka manampy anao koa izahay. Ampiasao ireto motera fikarohana ireto mba hahazoana ny vidiny mora indrindra ary manahy ny mankafy ny fialantsasatrao fotsiny.
Masinina fikarohana hotely mora
Ho hitanao eto ny tolotra hotely tsara indrindra. Tadiavo ary hamandraho ny trano fandraisam-bahininao amin'ny toe-javatra tsara indrindra, ao anatin'ny minitra vitsy ary miaraka amin'ny antoka rehetra.
Ny iray amin'ireo hevi-dehibe dia ny mahita hotely ahafahantsika mijanona sy miala sasatra amin'ny andro fialantsasatra. Ho an'ity, tsy misy na inona na inona misafidy ny tsara indrindra hotely mora vidy misy eran'izao tontolo izao. Na dia heverinao fa mety ho asa sarotra aza izany dia tsy ho sarotra amin'ny motera fikarohana ao amin'ny hotely. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mieritreritra afa-tsy ilay toerana tiantsika ho very mandritra ny andro vitsivitsy isika.
Vantany vao azontsika tsara, dia soratantsika ao amin'ny bara fikarohana. Aorianany, ny sisa tavela dia ny manapa-kevitra amin'ny andro sy volana izay hampiala-sasatra. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mijery ny fisehoan'ny kalandrie. Amin'izany dia ho mora kokoa ny mifidy ny andro. Ary farany, tsy maintsy misafidy ny isan'ny olona ianao.
Rehefa fenoina dia hiseho izy ireo ny tolotra sy fampiroboroboana tsara indrindra ny trano fandraisam-bahiny amin'ny faritra voafidy. Ho fanampin'izay, azonao atao ny misafidy safidy mahasarika toy ny trano fandraisam-bahiny misy akony rehetra na ireo manolotra sakafo maraina ihany ho anao. Ankehitriny dia mila manamarina fotsiny ianao raha tianao izany ary misafidy amin'ireo safidy samihafa ireo. Azo antoka fa ho sitrakao izy rehetra!
Mandehandeha amin'izay alehanao manana sidina ho anao izahay amin'ny vidiny tsara indrindra. Ampiasao ny motera fikarohana anay ary alao ny sidinao miaraka amin'ny antoka feno ary tena mora vidy.
Mikaroha sidina miaraka amin'i Rumbo
Mikaroha sidina amin'ny eDreams
Mikaroha sidina amin'i Skyscanner
Mikaroha sidina miaraka amin'i Atrapalo
Mikaroha sidina miaraka amin'i Liligo
Mikaroha sidina miaraka Lastminute
Raha efa nisafidy ny faritra hotsidihintsika isika, ary na ny trano fandraisam-bahiny aza azontsika iainana, dia mila manamarina ny fisian'ny sidina isika. Tsy mila fahasarotana hafa noho ny efa nohazavainay taminay ianao. Amin'ny pejy iray ihany dia afaka mahita ny motera fikarohana ianao sidina mora. Fitaovana iray izay manana ny zava-drehetra hisafidianana ireo tombontsoa lehibe ary hampiasana azy ireo ho azonao.
Betsaka ny olona mieritreritra fa very ny ampahany lehibe amin'ny tetibola amin'ny sidina. Satria tsy manana teti-bola fialan-tsasatra lehibe isika rehetra, dia mila manery kely. Mazava ho azy, misaotra motera fikarohana tsara ianao, afaka misafidy fifampiraharahana momba ny sidina ho anao. Hiseho ny vidiny tsara indrindra sy ireo orinasa manolotra azy ireo. Toy izany koa no hanondroana ny niandohana, ary koa ny toerana halehany sy ny ora faharetany. Araka izany, raha misy refy misy azy dia hambara mazava ihany koa. Raha vantany vao nameno ny saha nangatahana tao amin'ny motera fikarohana ianao dia hanana ny antoka rehetra anananao ary miaraka amin'ny vokatra amin'ny vidiny mahavariana indrindra.
toerana ny fiara manofa izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao ao amin'ny tanàna itodihanao. Manana ny tolotra lehibe indrindra izahay fiara manofa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy amin'ny vidiny mirary.
Raha tsy te-handray ny fiaranao ianao, fa te hifindra any amin'ny toerana alehanao miaraka amin'ny fiononana feno, dia afaka misafidy fiara manofa ihany koa ianao. Mba hisorohana ny fangatahana manokana sy ny fananana azy io rehefa miantsona ianao dia aza hadinoina ny motera fikarohana fiara.
Ao anatiny no ahafahanao miditra amin'ireo orinasa lehibe rehetra. Ho fanampin'izay, rehefa manoratra amin'ny Internet ianao dia afaka mandray soa avy amin'ny fihenam-bidy lehibe. Zavatra tsy maharary velively. Mazava ho azy, tombony iray hafa amin'ny famandrihana fiara manofa dia ny fahafahanao mitantana ny famandrihanao. Ity dia azonao atao ny manova na manafoana azy io mihitsy aza.
Torohevitra rehefa manofa fiara
Ho fanampin'ny maha-dingana tsotra anao, amin'ny alàlan'ny motera fikarohana dia tokony ho fantatrao izany fiara tsirairay dia samy manana ny vidiny. Hazavaina tanteraka amin'ny pejy tsirairay izay hidiranao izany. Hiankina amin'ny karazana fiara foana izy io ary indraindray na dia ny toerana hanofanantsika azy aza. Izany no mahatonga ny Renault Clío na ny Citroen C1 na C4 anisan'ny safidy mora indrindra. Mazava ho azy, araka ny lazainay aminao, tsy maintsy jerenao isaky ny tranokala izany ary vakio tsara ny fepetra.
Mamandraha isaky ny afaka manao izany ianao mialoha. Fantatsika tsara fa ny datin'ny vanim-potoana avo dia lafo kokoa ny vidiny. Ny orinasa sasany dia mitaky ny tsy tokony ho latsaky ny 25 taona ny mpamily, fa misy fanampiny azo ampiana. Aza adino fa tsy maintsy miala amin'ny fitoeran-tsolika foana ianao araka ny nahitanay azy. Izany no antony, raha azo atao, dia hifidy politika mifototra amin'ny tank feno / feno izahay. Amin'izany no hialantsika amin'ny tsy ampoizina ary hahafahantsika mameno lasantsy amin'izay sahaza antsika, raha mbola avelantsika ho feno izy.
Mialà fiantohana amin'ny dia
Raha handeha hitsangatsangana any ivelany ianao ary te hisoroka ny olana rehetra, hevitra lehibe ny miantoka fiantohana amin'ny dia. Mpanome antoka IATI anay manolotra fiantohana fitsangantsanganana malalaka indrindra mifanaraka amin'ny ilainao. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fifanarahana amin'ny fiantohana amin'ny alàlan'ny tranokalanay dia hahazo fihenam-bidy 5% ianao manoloana ny taha mahazatra.
Ny dingana hanaovana fifanarahana fiantohana dia tena tsotra, mila fotsiny ianao:
miditra ao tranokalan'ny mpiantoka amin'ny alàlan'ny fanindriana eto.
Lazao ny toeram-ponenanao, ny toerana halehanao ary ny daty
Tsindrio ny bokotra «Manisa kajy» ary vita ianao
Amin'izay fotoana izay dia manolotra anao ny katalaogin'ny vokatra rehetra ananany mandritra ny dia ataonao amin'ny vidiny tsara indrindra ilay fitaovana. Safidio ny iray mety indrindra amin'ny zavatra ilainao ary fenoy ny antsipirihanao hanakaramao azy ary EFA MISY INSURANO ANAO.
kitiho eto hamandrihana ny fiantoham-piaranao amin'ny fihenam-bidy 5%
Toerana itodiana mpizahatany maro kokoa isan-taona
Iray amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra ho an'ny mpizahatany i Frantsa. Ao amin'ny ny toerana voalohany, araka ny fanadihadiana navoaka. Tao anatin'izany no nanamarihana fa olona manodidina ny 85 tapitrisa no nisafidy ity toerana ity ary mazava ho azy, tsy maintsy lazaina fa tsy ho an'ny kely kokoa. Betsaka ny manintona ananan'i Frantsa. Ny mpizahatany misafidy ny Eiffel Tower ho iray amin'ireo fijanonana tsy maintsy jerena. Ny sasany sahy miakatra azy io, ny sasany kosa misaintsaina azy avy any ivelany ary indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro.
Na eo aza ny tsipika lava dia ilaina ihany koa ny Louvre. Misy zavatra tsy maintsy holazaintsika koa momba ny Katedraly Notre Dame. Ary tsy tokony hohadinoinao ny mitsidika ny iray amin'ireo toerana tantaram-pitiavana indrindra, na dia amin'ity faritra ity aza ny tsirairay dia samy manana an'io. Mont Saint Michel, rakotra misy fiangonana iray izay tsy maintsy jerena handinihina ny tena hatsarany. Ny Arc de Triomphe, ny Basilica an'ny Sacred Heart ary azoko atao ny mitanisa ireo tranonkala izay tokony ho hitanao, farafaharatsiny, indray mandeha eo amin'ny fiainanao.
Ny iray amin'ireo toerana misy mpizahatany betsaka indrindra, ary izany dia napetraka aorian'ny France, dia i Etazonia. Ao anatin'izy ireo dia misy faritra be olona noho ny hafa koa. Mazava ho azy, mazava ny mpizahatany.
Times Square: Ny kianja malaza any New York dia mahita mpizahatany maherin'ny 40 tapitrisa mandalo isan-taona. Miaraka amin'ny hazavana be dia be feno jiro fotsiny izy dia mahatonga azy io hijanona tsy maintsy atao.
Central Park: Ao afovoan'i Manhattan, hitantsika ity zaridaina mahafinaritra ity, izay efa hitantsika tamin'ny sarimihetsika marobe aza. Mpizahatany 35 tapitrisa eo ho eo isan-taona no mahita ny hatsarany sy ny habeny.
Las Vegas: Iza no tsy nanonofy ny hanambady any Las Vegas?. Tsy misy isalasalana, iray hafa amin'ny toerana itodiana indrindra. Tsy ho an'ity tanjona ity ihany, fa ho an'ny filokana, lalao majika na afaka mitsidika ny Grand Canyon.
Boston: Tanàna manana lova ara-kolotsaina lehibe izy. Ho fanampin'izay, tsy adinonay ny trano fisakafoanana Cheers sy ny tolotra gastronomika lehibe ananan'izy ireo.
San Francisco: Tanàn-dehibe iray be mpitsidika indrindra any Etazonia. Izy io dia manana fidirana tsara amin'ny zavatra rehetra atolotray, satria tsy mila mandeha lavitra loatra isika hahita izay rehetra ilaintsika.
Los Angeles: Tsy afaka nanadino an'i Los Angeles izahay. Ny tendrombohitra, ny toeram-pizahan-tany ary ny rendrarendra avoakany dia tsy maintsy atao.
Espaina dia ao ny toerana fahatelo an'ireo notsidihin'ireo mpizahatany. Ao anatin'izany dia manana toeran-kaleha ho an'ny tsiro rehetra isika. Angamba, ny mpizaha tany dia misafidy ny Moske ao Córdoba, ny Alhambra any Granada ary La Sagrada Familia any Barcelona, ​​ho toerana izay mitana ny vinavina rehetra. Seville sy ny Reales Alcázares koa dia tsy dia ao aoriana lavitra noho ny fitsidihana mafy. Any avaratra, ny Katedraly Santiago de Compostela no toerana fihaonan'ny mpivahiny sy ny mpitia zavakanto. Ny Aqueduct of Segovia na ny Katedraly Burgos dia heverina ho toerana fizahan-tany bebe kokoa.